မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းက ဂေါ်ဒူသာရ ကျေးရွာမှာ ၂၀၁၇၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က မီးလောင်နေပုံကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာအစိုးရဟာ နိုင်ငံတွင်းက ထွက်ပြေးနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းရေး လုပ်နေ တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်လို့ နိုင်ငံတကာတရားသူကြီးတွေပါဝင်တဲ့ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့က သောကြာနေ့က မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများက ပညာရှင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့က မျက်မြင် သက်သေတွေကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ၅ ရက်ကြာ စစ်ဆေးမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရှင်းလင်းနေတာဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ် လို့ ဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်သူ ဒန်နီရယ် ဖီရာရာစတိန်းက မလေးရှားတက္ကသိုလ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီလိုလူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ရှင်းလင်းနေတာတွေကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ရင် သေဆုံးသူအရေအတွက် ပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်း သူကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုဖိအားပေးဖို့ အဲဒီ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့ဟာ သူတို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ပေးပို့သွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ မလေးရှား၊ အီတလီနဲ့ သြစတြေးလျက တရားသူကြီးတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့မရှိကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း ၀န်ကြီး ပြော
ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံ
မောင်တောကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သွားရောက်လေ့လာ
နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ဆူရာကီယတ် အကြံပေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး အဆင့်သုံးဆင့်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော
ဒုက္ခသည်အိမ်ဆောက်ရေး အစိုးရနဲ့ သဘောတူညီချက် မရသေးဟု ကုလပြောဆို
မီးရှို့ခံရတဲ့ရွာတွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစိုးရ ဆောင်ရွက်မည်
သံတမန်တွေ မောင်တောဒေသကို့ ပို့ဆောင်ပေးဖို့ အတိုင်ပင်ခံရုံး ထုတ်ပြန်
Justice should be included accuse side and defence side. After listening from both sides with strong evidence, it should be decided. There should not depend on dirty politics and bias. Shameful justice from Malaysia and alliance.
Sep 24, 2017 12:21 PM
တရားသူကြီးတွေပါတဲ့အုပ်စုဆိုတော့ နှစ်ဖက်နားထောင်ဘို့တာဝန် မရှိပေဘူးလား။
Sep 23, 2017 11:16 PM